Kugadzira Injiniya - Suzhou Bricmaker Automation Co., Ltd.
7-DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZINOGADZIRA
Bottleneck musimboti, mukuru musoro & mudiki muswe.
Kudzivirira zvimwe zvemabhodhoro zvinokanganisa kugona kwekugadzira. Guarantee yakagadzirirwa & inotarisirwa kugadzirwa uye inotsvedza mainjiniya.
Kusanganisira mbishi zvigadzirwa zvakaunganidzwa, yekugadzira musangano, akapedza kuisira, hofisi nenzvimbo dzekugara, girini nzira mwenje uye zvimwe zvivakwa.
Kusanganisira iyo mbishi yekugadzirisa zvinhu (kupwanya, kukwegura), kuumba kwemuviri, dhizaini, kudzikisa zvidhinha, kurongedza, nezvimwe.
Ancillary michina kusarudzwa:
Zvinoenderana netekinoroji kusarudza inoenderana mashandisirwo emidziyo, kilns, zvishandiso zvekushandisa, emagetsi control system, semusangano, nezvimwe.
Raw zvinhu chengetedzo. Kupwanya chirimwa. Kuchembera chengetedzo. Kuchenesa mutsara. Girini yezvidhina yekuchengetera. 6-tanera kuomesa & 3-kupfura.Sintered zvigadzirwa.Packing.
2. Kubva pamamiriro emunharaunda
Sekondari kurongedza rack kurodha & kudzikisa tekinoroji
Shale.Xinjiang Kuvakwa kweguta Zvigadzirwa zvemhando yepamusoro
Kugadzirwa kwemhando yepamusoro-giredhi zvigadzirwa, kambani ine simba, ine kushambadzira kwakanaka kana mbishi zvinhu zvine hunyoro hwakawanda.
Tsvina ivhu Hupenyu sludge
Kuisira pamwe nematanho manomwe, 6-tunnel yekuomesa kamuri, Kupedzisa zvigadzirwa zvekuchengetedza
Sekondari kuisira nekadiki yekuomesa ngoro tekinoroji
Hunyoro hwepamusoro hwezvinhu, funga nezvehupfumi, izvi zvinoenderana nekambani diki nepakati, imwe nguva kana yechipiri kuisira zvese zvinogona kusarudzwa.
Sekondari kuisira, kana uri pachiyero cheyakakwira-vhoriyamu kubhururuka madota, yechipiri kuisira kuri nani pane imwe nguva kuisira, kunyanya kuburikidza nekugadzira yekuomesera kiln kodhi isina kukwira kuwedzera, goho rinowedzera, mari yekudyara yakakwira kupfuura imwe nguva kuisira, fekitori munda wakakwira zvishoma pane imwe nguva kuisira.
Imwe-nguva kuisira maitiro
Mbishi zvigadzirwa (marasha gangue, shale, nezvimwewo) ine yakaderera mwando zvemukati. Imwe nguva kuisira kunorerutsa kugadzirwa, kudzikisira mabasa, kugadzirisa mamiriro ezvakatipoteredza evashandi, kugadzirisa kugadzirwa kwevashandi, michina uye otomatiki nyore, yakazara mutengo wakaderera pane weSecondeding stacking maitiro.
3.Funga pane yakasvibirira zvinhu kunatsiridza uye yunifomu kurapwa
Raw zvinhu kunatsiridzwa
Zvichienderana nezvinhu zvakasiyana uye nesintered zvigadzirwa, saizi yezvinhu zvakasvibirira zvinodiwa zvakasiyana. Asi chirevo chizhinji ndechekuti granularity yakanaka yezvigadzirwa, epurasitiki mbishi zvinhu zviri kumusoro, zvinoenderana nezvakakwira zvigadzirwa zvinodiwa.
Natsa mbishi zvigadzirwa zvinoreva zvidimbu mbishi zvinhu zvakaputswa nekukanganisa kwemidziyo hombe, kozoti iyo mbishi yakasviba poda kumashure yekudyisa nekukurumidza kumhanyisa kwemidziyo midiki yekupwanya yakaita sevhiri vhiri, keji crusher, mupumburu crusher, nezvimwewo muchifaindi mbishi zvinhu.
Raw zvinhu yunifomu kurapwa
Yunifomu mbishi zvinhu, kunyanya kuburikidza otomatiki mvura uye zvemagetsi metering michina muchiyero chekumisikidza, kumutsa, kuendeswa kune yakakwegura kuchengetedza, ichigadzira mbishi zvinhu zvidimbu zvine hunyoro, kubuda uye kuwedzera kwayo kugadzikana, kugadzirisa iyo yekuumba zvivakwa zvezvinhu, kuomesa zvivakwa uye kubheka kuita, kunatsiridza zvigadzirwa kugona uye mhando.
4.Kiln chimiro, teerera kune iyo musimboti wekupisa sintering zvigadzirwa
Changxing Tela zvigadzirwa zvezvidhinha zvine zvidhinha-zvine masvingo zvidhinha, maitiro acho anoda yakadzika tembiricha, inononoka kuomesa, mweya inoyerera zvakaenzana, kubheka nekukurumidza. Saka matatu kubheka & imwe yekutsva maitiro, ita shuwa mhando uye kugona.
Changxing Tela. 3-tunnel kuomesa & 1-tunnel kupisa maitiro
5.Stacking nzira, teerera kune sintered zvigadzirwa chafariz musimboti
Iyo nzira ye stacking yakakosha kupfuura kupisa
Iwo iwo misimboti ndeyekuti yakakwira kugona, kudzikisa mutengo, mashandiro mashoma.
7.Kunetseka, kudyara uye kuchengetedza simba
Equipment kushandisa michina, robhoti kuisira, kuburitsa zvidhinha, kurongedza, otomatiki ekudzora masystem.
BricMaker supamaketi, turnkey, imwe-yekumira sevhisi.
Yedu yese basa kuve nechokwadi chekutsetseka kwekufamba kweyakagadzirwa maitiro, kuve nechokwadi chehunhu, kuwana hupfumi hweyero, kudzikisa kushandiswa kwesimba, kugadzirisa mashandiro, uye zviri nyore kune zveanoshanda manejimendi maitiro, kusimudzira yemubatanidzwa mufananidzo.